🥇 Kaonty momba ny baiko sy ny livraison
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 472
Vidéo comptable ny commande sy ny livraison
Manao compte ho an'ny commande sy ny livraison
Ny programa Universal Accounting System dia natao manokana ho an'ny orinasa mahomby amin'ny logistics, fitaterana, iraka ary na dia orinasa mpivarotra aza: ny rindrambaiko noheverina tsara dia ahafahanao manara-maso ny fizotran'ny asa, manatsara ny fandaminana ny asa, mifehy ny fanatanterahana ny baiko, manara-maso ny dingana tsirairay. amin'ny fanaterana, famakafakana ny kalitaon'ny serivisy omena ary mitazona kaonty amin'ny antsipiriany momba ny baiko miditra sy vita. Ny logiciel atolotray dia manome fitaovana maro isan-karazany amin'ny fandrindrana ny sehatry ny fandraharahana rehetra, manomboka amin'ny fitazonana sy fanavaozana ny angon-drakitra ka hatramin'ny famolavolana drafitra ara-bola ho an'ny ho avy; fa ny tena asa voavaha ity rafitra ity dia ny kaonty ny baiko sy ny fanaterana. Ny fanaterana entana dia mitaky fandrindrana tsara sy fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy mba hanovana haingana ny lalana sy handraisana ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fanatanterahana ny baiko mifanaraka amin'ny daty nomanina. Noho izany, ny rafitra kaonty dia mandray anjara amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny serivisy, ny fiovam-po ambony amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, ny fanitarana sy ny fampandrosoana ny orinasa ary, mazava ho azy, ny fahazoana fidiram-bola ambony tsy tapaka.
Ny lozisialy USU dia tsy mitovy amin'ny rafitra mitovy amin'ny fahatsorana sy ny hafainganam-pandehan'ny asa ao aminy, ny rafitra hita maso sy ny interface. Ny programa kaonty dia mizara ho vondrona telo lehibe, izay samy manao ny asany manokana ary mifandray amin'ny hafa. Ny fizarana References dia tranomboky data izay havaozina tsy tapaka sy ampian'ny mpampiasa. Izy io dia mitahiry vaovao momba ny zavatra ara-bola sy ny kaonty amin'ny banky, ny fifandraisana amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa, ny angon-drakitra momba ny sampana, ny isan'ny serivisy sy ny vidiny, ny fandaharam-potoanan'ny sidina ary ny famaritana ny lalana. Ny fizarana Modules no lehibe indrindra ary toerana iasana amin'ny fisoratana anarana baiko vaovao amin'ny fandefasana sy fanaraha-maso ny baiko mandeha. Ny baiko tsirairay dia misy fampahalalana momba ny mpandefa sy ny mpandray, ny lohahevitry ny fanaterana, ny refy, ny vidiny, ny mpiantoka, ny kajy ny vidiny sy ny vidiny. Mandritra izany fotoana izany, ny programa dia manatanteraka ny asan'ny famenoana ho azy ny tapakila sy ny fandefasana taratasy, ary koa ny fanontana ireo antontan-taratasy miaraka, izay manatsotra ny asa ary mahatonga azy io hahomby kokoa. Ary koa, ny fampahalalana rehetra momba ny baiko dia azo ampidirina sy aondrana avy amin'ny rafitra amin'ny endrika rakitra MS Excel sy MS Word. Amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny fandefasana entana ho avy dia ho mora kokoa amin'ny mpandrindra ny fanaraha-maso ny fizotran'ny fandefasana entana. Noho izany, ny sakana Modules dia loharanon'asa iray feno ho an'ny departemanta rehetra. Ny fizarana Reports dia manome fahafahana maro ho an'ny kaonty ara-bola sy fitantanana amin'ny alàlan'ny asa famokarana tatitra isan-karazany mandritra ny fe-potoana iray. Ny mpitantana ny orinasa dia afaka mampakatra fampahalalana mamakafaka momba ny dinamika sy ny firafitry ny fidiram-bola amin'ny fotoana rehetra, ny tahan'ny fitomboan'ny tombom-barotra ary ny tombom-barotry ny orinasa. Ny fampahalalana ara-bola rehetra dia azo jerena amin'ny endrika grafika sy kisary.
Ilaina ny rafitra fitantanam-bola ho an'ny serivisy mba hanaraha-maso ny kalitaon'ny fanatanterahana ny baiko, hanatanterahana ny dingana tsirairay amin'ny fitaterana, hijerena ny maha-ara-drariny ny fandaniana rehetra, hifehy ny fanarahana ny tondro fidiram-bola marina amin'ireo efa nomanina, sns. Vidio ny kaonty Universal Software rafitra ho an'ny asa mahomby sy mahomby!
Fikojakojana feno ny fototry ny mpanjifa miaraka amin'ny famantarana ny fifandraisana, ny fivoriana ary ny hetsika, ny fandefasana fampahafantarana momba ny fihenam-bidy sy ny hetsika hafa.
Mandefa fampandrenesana manokana ho an'ny mpanjifa momba ny sata sy ny fahatanterahan'ny baiko, ary koa ny fampahatsiahivana ny tokony handoavana.
Fitantanana sy fandrindrana ny trosa, fandraisana ara-potoana ny vola avy amin'ny mpanjifa, fisorohana ny toe-javatra tsy fahampiana ara-bola.
Famakafakana ny fahefa-mividin'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny famoronana tatitra momba ny volavolan-dalàna antonony, ary koa ny fijerena ny zava-bita ara-bola isaky ny andro fiasana.
Ny rafitra dia manana fitaovana ara-barotra ho an'ny fantsom-barotra amin'ny fampitahana ny mari-pamantarana ny isan'ny tolotra fanaterana natao, ny mpanjifa nifandray, ary ny tena nahavita ny fandefasana.
Ny fiheverana manokana dia raisina amin'ny fiheverana ireo tondro ara-bola manan-danja indrindra amin'ny famerenam-bola amin'ny orinasa, ny fanombanana ny fihetsehan'ny tombom-barotra sy ny soatoavina mety hitranga, ny famakafakana ny tombom-barotra sy ny fivoarana.
Tsara ny mitantana ny asa mifandray amin'ny sampana rehetra amin'ny sehatra iray miasa miaraka amin'ny fomba fiasa iray sy ny fandaminana ny dingana.
Ny baiko dia mandalo amin'ny fomba fankatoavana elektronika, izay manafaingana ny fitaterana.
Ny kaonty momba ny karama dia tanterahana amin'ny alàlan'ny fanaovana automatique ny kajy amin'ny ampahany sy ny isan-jaton'ny karama, izay manampy amin'ny fanafoanana ny trangan-javatra diso.
Fahafahana betsaka amin'ny vinavina ara-bola mahomby, amin'ny fijerena ny antontan'isa tamin'ny vanim-potoana lasa sy ny fananganana drafitry ny fandraharahana.
Ny zotra fanaterana dia azo ovaina mandritra ny fitaterana raha ilaina.
Fanamarinana ny fahombiazan'ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fiheverana ny fampiasana ny fotoana fiasana sy ny hafainganan'ny fanatanterahana ny asa nomena.
Ny rafitra dia ahafahanao mametaka ireo attachments ary mandefa azy ireo amin'ny mailaka.
Ny fanamafisam-peo isan-karazany amin'ny programa dia azo atao ny mahafeno ny fepetra rehetra sy ny dingana anatiny ao amin'ny fikambanana noho ny fahafahan'ny fanovana.
Ny kaonty amin'ny vola azo amin'ny sehatry ny fidiram-bola dia ahafahana mamantatra ny faritra tena mampanantena ny fampandrosoana.